‘सलहेसः द पिपुल्स हिरो’ का लागि कलाकार खोजिँदै (अडिसन आवेदनसहित) « प्रशासन
‘सलहेसः द पिपुल्स हिरो’ का लागि कलाकार खोजिँदै (अडिसन आवेदनसहित)
प्रकाशित मिति :7February, 2018 6:17 pm
काठमाडौँ । १५ सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक कथामाथि बनाइन लागेको ‘सलहेसः द पिपुल्स हिरो’ ले सबै चरित्रका लागि अडिसनबाट कलाकार छान्ने भएको छ ।
मिथिलाका राजा सलहेसको गाथामाथि निर्माण हुने भनिएको उक्त फिल्मका लागि सोमबारदेखि कलाकारको अडिसन आह्वान गरिएको छ ।
राजा सलहेस, मन्दोदरी, भैरव भूपाल, मोतीराम, वृधेश्वर, करिकन्हा, राजा सैनी, रेश्मा, हिनपतलगायत ३० ऐतिहासिक मुख्य पात्रहरूसहित दर्जनौं सहायक पात्रका लागि आवश्यक सबै कलाकार अडिसनमार्फत छनोट गरिने फिल्मका निर्देशक अमितेश शाहले जानकारी दिए । ‘यो फिल्म ऐतिहासिक कथामाथि बन्ने भएकाले हामीले चरित्र सुहाउँदा कलाकार मात्र छनोट गर्छौं । चलेकै कलाकार राख्दा पनि क्यारेक्टरअनुसार अडिसन गराएरै राख्छौं,’ उनले भने ।
भोर कम्पनीको ब्यानरमा राजकुमार महतोद्धारा निर्माण गरिन लागेको फिल्मका लागि विराटनगर, जनकपुरधाम, नेपालगन्ज, काठमाडौंसहित भारतका दरभंगा, पटना, मुम्बई, दिल्ली र कोलकाता, बंगलादेशको ढाका र चीनको बेइजिङसम्म अडिसनका लागि पुगिने निर्देशक शाहले बताए ।
फिल्मका प्रमुख पात्र सलहेस मिथिलामा राजा जनकपछि प्रादुर्भाव भएका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व मानिन्छन् । उनलाई तराईको दुसाध समुदायले अहिले पनि भगवान्का रूपमा पूजा गर्छ । ‘लामो समयको रिसर्चपछि हामी फिल्म बनाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ फिल्मका निर्मातासमेत रहेका रिसर्चर राजकुमारमहतोले भने ।
अनुमानित पाँच करोड रुपैयाँ अनुमानित बजेट राखिएको यस फिल्मको छायांकन धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, झापा, चितवन र भारतका स्थानहरूमा हुनेछ ।
फिल्म निर्माणको घोषणा एक वर्षअघि नै भए पनि स्क्रिप्ट र रिसर्चमा समय लाग्दा फिल्म फ्लोरमा जान ढिलो भएको बताउँदै निर्देशक शाहले थपे, ‘अब काम द्रुत गतिमा हुन्छ । कलाकार छनोट हुनेबित्तिकै वर्कसप गर्छौं । त्यसपछि सुटिङमा जानेछौं ।’
फिल्ममा कथा डा. राजेन्द्र विमल, संवाद महेन्द्र मलंगिया, पटकथा निर्देशक शाहकै र भीएफएक्स अनुपम शाहको रहनेछ । सुनील–प्रवेशको संगीत तथा डा. विमल, अशोक दत्त र ईश्वर दाहालका गीत रहनेछन् ।
अडिसन आवेदनका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्
20 April, 2021 4:57 pm
काडमाडौँ । चर्चित एंव लोकप्रिय अभिनेत्री केकी अधिकारीलाई कोरोना संक्रमण
सिरहा । गायक तथा सामाजिक अभियानकर्मी गुरुशरण सदाको निधन भएको
19 April, 2021 5:12 pm
मदनकृष्ण श्रेष्ठसहित परिवारका पाँच जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौँ । कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ।